Fanendahana anaty taksibe Tra-tehaka ilay mpandrovitra poketra sy tarehy
Lehilahy 34 taona, mpanendaka no tra-tehaky ny fokonolona sy ny polisy avy ao amin’ny boriboritany faha-6 Ambohimanarina teny Andranomena ny talata 31 desambra teo tokony ho tamin’ny 1 ora tolak’andro . Zotram-pitaterana mankany Ivato nanala olona teo Andranomena no nidiran’ity lehilahy mpanendaka ity.
Niditra toy ireny mpandeha tsotra ireny izy ka nipetraka teo akaikin’ny vehivavy iray nitazona poketra. Raha variana ilay vehivavy dia nosavainy ny poketrany. Tsikaritry ny olona tao anaty taksibe izany fihetsika izany ka nisy niteny hoe : “mpanendaka io !” Nikasa handositra ilay lehilahy, fa taitra tamin’izany kosa ny mpandeha rehetra tao anaty taksibe ka nirohatra nitazona azy. Iny izy andeha ivoaka ilay fiara iny no nisy lehilahy iray nibahana ny lalany ; notatahiny tamin’ny hareza ny tarehiny ka tafavoaka ihany izy. Nampandre ny Polisy niasa tsy lavitra teo ny fokonolona. Raikitra ny fifanenjehana ka tratra teo akaikin’ny “Gastro” Andranomena ity olon’dratsy ity. Noentina avy hatrany teny amin’ny paositry ny polisin’ny boriboritany faha 6 Ambohimanarina ho atao famotorana . Fantatra fa anisan’ireo mpanao io asa ratsy io eny amin’iny faritra Andranomena sy ny manodidina iny ity lehilahy ity.